Archive du 20200512
Morondava Tratra ilay lehilahy namono ny reniny
Lehilahy iray 21 taona no voasambotry ny polisy miasa ao amin’ny CSP Morondava ny 09 mey lasa teo tany an-toerana noho ny famonoana an-dReniny izay niteraka azy.
Volley-ball Nofoanan’ny FIVB ny League des Nations 2020
Noho ny fihanaky ny tsimokaretina Covid-19 maneran-tany izay mety ho fiatraikan’izany any amin’ireo tanàna handray ny hetsika dia nanapa-kevitra ny FIVB “Federasiona Iraisam-pirenen’ny taranja volley-ball,
Mpandeha Taxi be Midina mamafa lalana izay tsy mametraka arotava
Sarotiny dia sarotiny ireo mpitandro filaminana ankehitriny eo amin’ny fanarahana fepetra mikasika an’ireo fiarovana isan-tsokajina mba hisorohana ny fiparitahan'ny tsimokaretina Covid-19.
Taksibe eto Antananarivo Tsy nisy « gél désinfectant » ny ankamaroany
Tsy nanana « gél désinfectant » ny ankamaroan’ireo taksibe teto Antananarivo omaly alatsinainy 11 mey fa ireo nanana ambiny sisa tsy lany sisa no nampiasa tamin’ny ankapobeny.
Ministeran` ny fanabeazam-pirenena Nahazo fanampiana avy amin` ny BOA Madagascar
Nitondra ny anjara biriky ho amin` ny fiatrehana ny coronavirus ny BOA Madagascar ka ny ministeran` ny fanabeazam-pirenena no nisitraka izany.
Mpianatra ao amin’ny T6, T7 ary T8 Nozaraina boky hahafahany mampiana-tena
Natomboka tamin'ny fomba ofisialy omaly Alatsinainy 11 May teny amin'ny CEG Ambanitsena, fari-piadidiam-pampianaran’i Manjakandriana, ny fizarana ireo boky hahafahan’ireo mpianatra mampiana-tena na "livret d'apprentissage" antsoina ihany koa hoe "livret essentiel".
Varotra - ranomasimbe indianina Hivory ireo firenena miisa 6 ao amin’ny CCI
Ho karakarain’ny avy eo anivon’ny Cap Business Ocean Indien rahampitso ny fivorian’ireo komitim-panatanteraka eo anivon’ny PRCC-OI na ny fandaharan’asa fanohanana ny fivoaran’ny fandraharahana ara-barotra aty amin’ny ranomasimbe indianina.
Vondron’ny mpanao hiragasy Vonjeo izahay fa tapaka fihinanana
Fampisehoana hatrany amin’ny 30 isa no nofoanana ho an’ireo vondron’ny mpanao Hiragasy.
Mponin'i Beabo Ambovombe Androy Nahazo fiofanana momba ny fanodinana sy fitahirizana sakafo
Antoka iray lehibe hahafahana miatrika ny aretina « coronavirus » ny fananana hery fiarovana matanjaka.
Kaominina Talatamaty Nampiana ny jiro hanazava ny tanàna
Tsy nisy jiro hatramin’izay ny tsenan’ny tantsaha ao Talatamaty. Isan’andro anefa tamin’ny fotoana mbola tsy nisian’ny aretina COVID 19 dia amin’ny 03 ora
Fisotroan-dronono amin`ny alalan` ny banky Mila manatitra “certificat de vie »
Noho ny fitohizan’ ny hamehana ara-pahasalamana dia ny faha - 11 ka hatramin’ny faha - 15 ny volana mey no fanaterana ny « certificat de vie »
Covid Organics Mbola misy ny ahiahy tsy hihavanana ?
Nahamaika ny fitondram-panjakana Malagasy ny famoahana sy ny fanaovana doka ilay tambavy Covid Organics.